Runyoro rwezita rine zita Markus
Mazita ekurumbira, mazita akawanda ekupedzisira ane zita Markus.
Mazita akawanda anowanzozivikanwa nezita Markus
Zita rose rine zita Markus
Surnames nemazita evanhu vane zita Markus
Zvimwe nezita rekutanga Markus
Markus zvinoreva zita
Chii chinonzi Markus chinorevei? Zita rezita Markus.
Markus kubva kune zita rekutanga
Zita rokuti Markus rakabva kupi? Kubva kwezita rokutanga Markus.
Markus tsanangudzo yezita rekutanga
Iri zita rekutanga mune mamwe mimwe mitauro, kupereta nemataurirwo emutauro, mazita evanhukadzi nevakadzi vari zita rekutanga Markus.
Markus mune dzimwe mitauro
Dzidza kuti zita rekutanga sei Markus rinofananidza nezita rokutanga mune rimwe mutauro mune imwe nyika.
Iwe unoti sei Markus? Nzira dzakasiyana dzekutaura Markus. Kutumidzwa kwe Markus
Markus kuwirirana nemazita
Markus kuenderana kwekuedzwa nemazita.
Markus kuenderana nemamwe mazita
Markus kuenderana kwekuedzwa nemamwe mazita.
Tsamba yemazita ane zita Markus